(Self-Study Learning Style)
စာရေးသူတို့ ကိုယျခန်ဓာကွီးထှားဖို့အတှကျ ငယျစဉျကတညျးကယခုတိုငျ အဟာရမြှတအောငျ အစားအစာပေါငျး မြားစှာကို စားသုံးကာ ဖှံ့ဖွိုးခဲ့ကွသလို၊ စိတျနသေဘောထား၊ ကြှမျးကငျြမှု၊ အသိပညာ စသော ဉီးနှောကျ ၊ အသိဉာဏျနှငျ့ နှလုံးသား ရငျ့ထှား သနျမာလာစရေနျ ကြောငျးမြား၊ သငျတနျးမြား၊ စာအုပျပေါငျး မြားစှာကိုဖတျရှုလလေ့ာကာ တကျရောကျသငျယူ ခဲ့ကွပါတယျ။ စာအုပျစာပမြေား ကိုဖတျရှု လလေ့ာ သငျယူခွငျး၊ ကြောငျးမြား၊ သငျတနျးမြားကိုတကျရောကျသငျကွားခွငျး၊ ဖွတျသနျးခဲ့သော အတှအေ့ကွုံမြားမှ တဈဆငျ့ သငျယူရရှိခွငျး စသညျတို့သညျ သိမှု၊ ဥာဏျပညာ၊ စဉျးစား တှေးချေါ မြှျောမွငျနိုငျစှမျး စသညျတို့ကို တဈဆငျ့ပွီးတဈဆငျ့ မွှငျ့တကျလာပွီး၊ မိမိတို့ဘဝ ပိုမိုတိုးတကျလာစရေနျ ဂရုတစိုကျ လလေ့ာလုပျဆောငျ ရမညျဆိုတာကို သငျယူလလေ့ာသူကောငျးမြားမှ ကောငျးစှာ သဘောပေါကျ နားလညျထားကွပါတယျ။
ယနေ့ ၌ သငျတနျးပေါငျးမြားစှာတို့၌ တကျရောကျလလေ့ာသငျယူသူမြားပွညျ့နခွေငျးသညျ ကိုယျ ဝါသနာ ပါရာ နယျပယျ၌ တိုးတကျမွငျ့မားစရေနျ သငျယူလလေ့ာခွငျးမှာ အရေးကွီးသောအခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျ နသေညျ ဆိုတာကို ပွသလကျြရှိနပေါသညျ။ ဒီနရော၌ စာရေးသူတငျပွခငျြတာက လလေ့ာသငျယူခွငျးဖွဈစဉျဆိုသညျမှာ သငျတနျးတကျမှသာလငျြရရှိခွငျးလား ဆိုတာကိုပါ. . . .
Learning and Development Method တှေ Model မြား နှငျ့ Learning Style မြားစှာကိုဖျောထုတျထားမှုတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ယခုဆောငျးပါးမှာ အာရုံးစိုကျကာဦးစားပေးဖျောပွမှာကတော့ Self-Study Learning Style အကွောငျးကိုပါ။ ဆကျလကျလလေ့ာကွညျ့ရအောငျ. . . . . .
Self-Study Learning Style သညျ Informal Learning အမြိုးအစားထဲတှငျပါဝငျပွီး၊ တိကသြော ရညျရှယျခကျြတဈခု အတှကျ မိမိသိလိုသော သတငျးအခကျြအလကျမြားကိုရှာဖှလေလေ့ာခွငျး(သို့) ရရှိလာသော သတငျးအခကျြအလကျမြားကို လိုအပျသော နရောမြားသို့ ဖျောထုတျ ဖွနျ့ဖွူး၊ ဝမြှေပေးခွငျး စသောဖွဈစဉျဖွဈပါသညျ။
Self- Study ကို Dictionary ထဲမှာဖျောပွထားတာကတော့ “The study of sometimes by oneself, as through tasks, records, etc. “
ကိုယျလလေ့ာလုပျဆောငျခငျြတာတှကေို တဈယောကျတညျးမှတျတမျးမှတျရာမြားဖွငျ့ လလေ့ာခွငျးကို Self-study လို့ချေါပါသညျ။ အပြျောအပါးနောကျမလိုကျဘဲ မိမိကိုယျကိုမိမိ ဉီးဆောငျကာ Self-Study Method မြားဖွငျ့လလေ့ာခွငျး ကိုချေါပါတယျ။Self-Studyလုပျဆောငျလို့ရသော အသုံးမြားသောနညျးလမျးမြားကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Internet ကိုအသုံးပွု၍ လလေ့ာခွငျး၊
တီဗီ၊ ရဒေီယိုမြားမှ Learning Program မြားကိုလလေ့ာခွငျး၊
တှကွေုံ့ရသော အရာမြားမှ သငျခနျးစာယူလလေ့ာခွငျး၊
ဘယျလို Self-study Method ကိုပဲသုံးသုံး၊ သငျယူသူမြားသညျ မိမိမှ သငျယူလလေ့ာလိုရခွငျး ရညျရှယျခကျြကိုပွညျ့မီစရေနျ သငျယူမှုအပျေါမိမိဘာသာ တာဝနျယူဆောငျရှကျရပွီး၊ ထို ရညျမှနျးခကျြမြားကိုပွညျ့မီစရေနျ မိမိဘယျလိုအခွအေနေ ရောကျနသေညျဆိုတာကို အမွဲတမျး အကဲဖွတျ ကာ လုပျသငျ့လုပျထိုကျသောဆုံးဖွတျခကျြမြားကို ခမြှတျလုပျဆောငျရပါမညျ။
Self-Study Method သညျ Learning လုပျရာတှငျ ထိရောကျသောနညျးလမျးတဈခုဖွဈပွီး၊ သို့ရာတှငျ ဉီးဆောငျပွသပေးသူ တဈစုံတဈယောကျမရှိသညျ့အတှကျ တဈခြို့သော လလေ့ာရာနရောမြားတှငျ ခကျခဲကွနျ့ကွာနခွေငျး၊ မှားယှငျးမှုမြား ကိုမသိရှိပဲ အမှားမြားနောကျသို့သာလိုကျမိနခွေငျး၊ ထိုကဲ့သို့ကိစ်စရပျမြိုး ဖွဈတတျကွသညျကိုတှရှေိ့ရ့ပွီး၊ Self-Study လုပျသူမြားမှ ထိုအခကျြကို သတိခပျြရပါမညျ။
Self-Study လုပျရခွငျးသညျ မိမိ၏ လလေ့ာသငျယူရခွငျး ရညျရှယျခကျြကို အကောငျအထညျဖျောခွငျးဖွဈသဖွငျ့ အဖှဲ့လိုကျ သငျကွားရာတှငျ ကွာတတျသော အလအေ့ထမြားကိုရှောငျရှားနိုငျပါသညျ။ ဥပမာ Self-study Learner သမား တဈယောကျကို အကွောငျးအရာတဈခု (သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဆိုပါစို့) အတှကျ Presentation လုပျရမညျ ဟု ကမျးလှမျးလာပါက ထိုအကွောငျးအရာအတှကျ သငျတနျးတကျမညျ့အစား သဘာဝပတျဝနျး ကငျြထိနျးသိမျး ရေးနှငျ့ ဆိုငျသော အကွောငျးအရာမြား ကိုသာ ရှာဖှလေလေ့ာပွီး ပှဲနှငျ့လိုကျလြော ညီထှဖွေဈစမေညျ့ ပုံစံမြားကိုသာ ရှာဖှလေလေ့ာ ပွငျဆငျနပေါပလေိမျ့မညျ။
သငျတနျးစရိတျမြားမပေးရလို့ Self-study သညျငှမေကုနျစပေါဘူး၊ နရောတိုငျး တှငျလုပျဆောငျလို့ ရသညျ့အတှကျ သှားလာရသညျ့အခြိနျကိုလြော့ခပြေးကာ အခြိနျကုနျသကျသာစပေါတယျ။
ထိုငျနရေငျး၊ လမျးလြောကျနရေငျး၊ လှဲနရေငျး၊ ကားစီးနရေငျး မိမိကွိုကျသလို စိတျပါသလို မိမိတို့လိုအပျနတောကို လလေ့ာလို့ရသဖွငျ့ Flexible ဖွဈစပေါသညျ။
Self-Study လုပျဆောငျခွငျးသညျ မိမိကိုယျကို ပိုမို အားကိုးမိစကော၊ တဈကိုယျရညျဖှံ့ဖွိုးဖို့အတှကျ အားဖွဈစေ ပါတယျ။
မိမိတို့ လလေ့ာလိုသော၊ သိရှိခငျြသော အကွောငျးအရာတှကေိုလလေ့ာမိလလေေ၊ ပိုမိုသိရှိလာလလေေ မိမိကိုယျကိုယုံကွညျမှုရှိစကော Motivation ကိုတကျစပေါသညျ။
Dead-Lineကိုသတျမှတျထားဖို့နှငျ့ ၊ လလေ့ာသောအခြိနျတှကေို ခှဲဝမြှေတမျးစီမံဖို့လိုအပျပါတယျ။
Learning Objective မြား achievement ရသညျအထိ မိမိတို့လလေ့ာလိုကျသော အကွောငျးအရာမြားကို တဈပိုငျးတဈစနှငျ့ မမေ့လြေ့ော့လြော့ မရှိစရေနျ သခြောစှာအာရုံစိုကျကာ Follow-up လိုကျဖို့လိုအပျပါသညျ။
တိကစြှာ ခမြှတျထားသော မိမိ၏ Learning Objective ထဲမှ ခကျခဲနသေော အပိုငျးမြားကိုခနျြထားပါ၊ အကူညီလိုအပျပါက သိရှိနားလညျတကျကြှမျးသူထံ ဆကျသှယျမေးမွနျးပါ။ မေးမွနျးရာတှငျ စနဈတကြ မေးခှနျး ထုတျနိုငျစရေနျ အသအေခြာ ပွငျဆငျသှားပါ။
အကွောငျးအရာတဈခုအတှကျ သငျလလေ့ာနသေော Learning Objective သညျ Achievement ဖွဈပွီး အတိုငျးအတာတဈခုအထိရောကျပါက ဒီ့ထကျပိုဆကျလလေ့ာသငျ့မသငျ့နှငျ့ တဈခွားဘာအကွောငျးအရာမြား ကို ခြိတျဆကျလလေ့ာမလဲဆိုတာကိုလညျး သငျ၏ အခွအေနေ (Career Progressive) ပျေါမူတညျကာ အကဲဖွတျ ဆုံးဖွတျဖို့ လိုပါတယျ။
လလေ့ာရာတှငျ အကွောငျးအရာ အခကျြအလကျမွောကျမြားစှာကို စုဆောငျးပေးထားသော အရငျးအမွဈ စငျတာ (ဥပမာ − စာကွညျ့တိုကျမြား၊ အမရေိကနျစငျတာ − အစရှိသညျ့နရော) တှထေံ မှ စီမံကိနျးဆိုငျရာ စာတမျးတှေ၊ သုတသေနစာတမျးတှေ နှငျ့ တဈခွားသော သငျ့လလေ့ာမှုအတှကျ အရေးပါတာတှကေိုလညျး လလေ့ာလို့ ရပါသေးတယျ။
Self-Study ကိုလုပျဆောငျရာတှငျ အလုပျဖွဈစရေနျ အောကျပါအခကျြမြားကို လုပျဆောငျပါ၊
Self- Study လုပျဆောငျလိုသူမြားအတှကျ Check-List
တိကသြော Learning Objective မြားကို ခမြှတျပါ။ (ဥပမာ − ယခုလလေ့ာနတောတှပွေီးပွတျသောအခါ မိမိဘာတှကေိုလုပျဆောငျလာနိုငျမလဲ ဆိုတာပေါ့)။
ပထမအဆငျ့မှ ခမြှတျထားသော Learning Objective ကို မေးခှနျးမြားဆကျတိုကျထုတျပါ။ (ထိုသို့ မေးခှနျးထုတျခွငျးသညျ မိမိ ဘယျနရောကစတငျလလေ့ာရငျ အဆငျပွမေလဲဆိုတဲ့လမျးစကိုထှကျလာပါလိမျ့မယျ)။
မိမိလလေ့ာမညျ့ ဘာသာရပျ အကွောငျးအရာအတှကျ လိုအပျသော သတငျးအခကျြမြားစုဆောငျးနိုငျစရေနျ လိုအပျသောအရာမြား( ဥပမာ − စာအုပျစာတမျး၊ Internet Website ၊ တဈခွားသော အရာမြား နှငျ့ ထိုပစ်စညျးမြားအတှကျ ကုနျကစြရိတျမြား)။
သငျလလေ့ာနတောတှနှေငျ့ပတျသကျပွီး၊ သငျ့ကိုကူညီဆှေးနှေးပေးနိုငျမညျ့သူတှေ၊ သငျ့သိရှိလလေ့ာထားတဲ့ သတငျး အခကျြအလကျတှကေို ပွနျလညျအသုံးခနြိုငျမညျ့နရောတှကေိုရှာဖှပေါ။
Information Source တှကေို List လုပျပါ၊ Reflective ဖွဈစဉျထဲမှာ သငျ့ကိုကူညီသူတှကေိုလညျးမှတျသားထားပါ။
သငျ့ရဲ့ Learning Objective ကိုထပျမံ၍ အကဲဖွတျပါ ၊ သငျ့ကိုယျသငျမေးပါ၊ အကယျ၍ သငျလလေ့ာလိုတာတှကေို လလေ့ာပွီးရငျ ဘာကိုဆကျလုပျမှာလဲဆိုတာကိုလညျး အဖွရှောရငျး ရှဆေ့ကျသှားမညျ့ အနာဂတျ လုပျငနျးစဉျတှနှေငျ့ ကိုကျညီမှုရှိ၊ မရှိစိစဈပါ။
ယခုလလေ့ာလိုကျတဲ့ လလေ့ာမှုအရ သငျနှငျ့ သငျ့အဖှဲ့အစညျးကို ဘယျလိုအကြိုးပွုနိုငျမလဲ ၊ ဘယျလောကျထိ အကြိုး ပွုနိုငျမညျဟု မြှျောလငျ့ထားလဲ။
ဘယျသူတှသေညျ Self-Study ကို ပိုမိုကာ လိုအပျမလဲ၊
ကြောငျးတှငျးစာမြားကိုလလေ့ာနသေောကြောငျးသားမြား၊ ကြောငျးပွငျပ မိမိနှဈသကျရာ ဘာသာရပျမြားကို လလေ့ာနသေူမြား (မလလေ့ာခငျ ဘာသာရပျအခွခေံမြားကို ကောငျးစှာသငျကွားတကျမွောကျထားသူဖွဈရမညျ) ။
သီအိုရီပိုငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး အထူးကြှမျးကငျြသော ပုဂ်ဂိုလျမြား။
သကျဆိုငျရာ ဘာသာရပျမြားကို စနဈတကမြလလေ့ာမသငျယူခဲ့ရသောသူမြား။
လကျရှိတှငျ ပွသနာရပျတဈခြို့ကိုကွုံတှနေ့ရေပွီး ထိုပွသနာရပျနှငျ့ပတျသကျ၍ ဖွရှေငျးနိုငျစရေနျ လလေ့ာ ဆောငျရှကျနသေူမြား။
ရာထူးတိုးရနျကွိုးစားနသေော ဝနျထမျးမြား၊ အလုပျနရောကောငျးသို့ ပွောငျးခငျြနသေူမြား၊ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး နယျပယျ ပွောငျးလဲခငျြ သူမြား။
Project ပိုငျးဆိုငျရာမြားကို ကောငျးစှာလုပျဆောငျနိုငျစရေနျ ကွိုးစားနရေသောအဖှဲ့အစညျမြား။
အခွအေနတေဈခုအပျေါတှငျ (ဥပမာ- သငျတနျးမြား၊ Seminar ဟောပွောပှဲမြား၊ Workshop မြား) Learner မြားမေးခှနျးထုတျထားမှုမြားကို ပှဲအတှငျး နောကျမှ အကွောငျးပွနျ ဖွဆေိုမညျဟု ပွောခဲ့ခွငျးအပျေါ ပှဲပွီးတှငျ ဖွဆေိုအကွောငျးပွနျနိုငျရနျ ကွိုးစားနရေသော ဦးဆောငျဆှေးနှေးသူမြား စသညျတို့သညျ တဈခွားသူမြားထကျ ပိုမိုကာလိုအပျနိုငျပါသညျ။
ဒါဆိုရငျ Self-Study လုပျဆောငျရခွငျး၏ ကောငျးကြိုးတှကေို သိလောကျပွီပေါ့၊ လုပျဆောငျဖို့ကို စာရေးသူမှ အားပေးပါရစေ။ ယခုဒီဆောငျးပါးကိုလညျး Self-Study Learner မြား မြားပွားလာစရေနျ ရညျရှယျကာ ယခု တဈပတျအတှကျရေးသားလိုကျရပါသညျ။
ဘဝအတွက်အရေးပါဆုံးသော လေ့လာလုပ်ဆောင်နည်း (Self-Study Learning Style)
စာရေးသူတို့ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားဖို့အတွက် ငယ်စဉ်ကတည်းကယခုတိုင် အဟာရမျှတအောင် အစားအစာပေါင်း များစွာကို စားသုံးကာ ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကြသလို၊ စိတ်နေသဘောထား၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာ စသော ဉီးနှောက် ၊ အသိဉာဏ်နှင့် နှလုံးသား ရင့်ထွား သန်မာလာစေရန် ကျောင်းများ၊ သင်တန်းများ၊ စာအုပ်ပေါင်း များစွာကိုဖတ်ရှုလေ့လာကာ တက်ရောက်သင်ယူ ခဲ့ကြပါတယ်။ စာအုပ်စာပေများ ကိုဖတ်ရှု လေ့လာ သင်ယူခြင်း၊ ကျောင်းများ၊ သင်တန်းများကိုတက်ရောက်သင်ကြားခြင်း၊ ဖြတ်သန်းခဲ့သော အတွေ့အကြုံများမှ တစ်ဆင့် သင်ယူရရှိခြင်း စသည်တို့သည် သိမှု၊ ဥာဏ်ပညာ၊ စဉ်းစား တွေးခေါ် မျှော်မြင်နိုင်စွမ်း စသည်တို့ကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် မြှင့်တက်လာပြီး၊ မိမိတို့ဘဝ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ဂရုတစိုက် လေ့လာလုပ်ဆောင် ရမည်ဆိုတာကို သင်ယူလေ့လာသူကောင်းများမှ ကောင်းစွာ သဘောပေါက် နားလည်ထားကြပါတယ်။
ယနေ့ ၌ သင်တန်းပေါင်းများစွာတို့၌ တက်ရောက်လေ့လာသင်ယူသူများပြည့်နေခြင်းသည် ကိုယ် ဝါသနာ ပါရာ နယ်ပယ်၌ တိုးတက်မြင့်မားစေရန် သင်ယူလေ့လာခြင်းမှာ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် နေသည် ဆိုတာကို ပြသလျက်ရှိနေပါသည်။ ဒီနေရာ၌ စာရေးသူတင်ပြချင်တာက လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်ဆိုသည်မှာ သင်တန်းတက်မှသာလျင်ရရှိခြင်းလား ဆိုတာကိုပါ. . . .
Learning and Development Method တွေ Model များ နှင့် Learning Style များစွာကိုဖော်ထုတ်ထားမှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ယခုဆောင်းပါးမှာ အာရုံးစိုက်ကာဦးစားပေးဖော်ပြမှာကတော့ Self-Study Learning Style အကြောင်းကိုပါ။ ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင်. . . . . .
Self-Study Learning Style သည် Informal Learning အမျိုးအစားထဲတွင်ပါဝင်ပြီး၊ တိကျသော ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု အတွက် မိမိသိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလေ့လာခြင်း(သို့) ရရှိလာသော သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်သော နေရာများသို့ ဖော်ထုတ် ဖြန့်ဖြူး၊ ဝေမျှပေးခြင်း စသောဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။
Self- Study ကို Dictionary ထဲမှာဖော်ပြထားတာကတော့ “The study of sometimes by oneself, as through tasks, records, etc. “
ကိုယ်လေ့လာလုပ်ဆောင်ချင်တာတွေကို တစ်ယောက်တည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာများဖြင့် လေ့လာခြင်းကို Self-study လို့ခေါ်ပါသည်။ အပျော်အပါးနောက်မလိုက်ဘဲ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ဉီးဆောင်ကာ Self-Study Method များဖြင့်လေ့လာခြင်း ကိုခေါ်ပါတယ်။Self-Studyလုပ်ဆောင်လို့ရသော အသုံးများသောနည်းလမ်းများကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
• Internet ကိုအသုံးပြု၍ လေ့လာခြင်း၊
• အသံဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များဖြင့်လေ့လာခြင်း၊
• တီဗီ၊ ရေဒီယိုများမှ Learning Program များကိုလေ့လာခြင်း၊
• တွေ့ကြုံရသော အရာများမှ သင်ခန်းစာယူလေ့လာခြင်း၊
ဘယ်လို Self-study Method ကိုပဲသုံးသုံး၊ သင်ယူသူများသည် မိမိမှ သင်ယူလေ့လာလိုရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်မီစေရန် သင်ယူမှုအပေါ်မိမိဘာသာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပြီး၊ ထို ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေရန် မိမိဘယ်လိုအခြေအနေ ရောက်နေသည်ဆိုတာကို အမြဲတမ်း အကဲဖြတ် ကာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
Self-Study Method သည် Learning လုပ်ရာတွင် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သို့ရာတွင် ဉီးဆောင်ပြသပေးသူ တစ်စုံတစ်ယောက်မရှိသည့်အတွက် တစ်ချို့သော လေ့လာရာနေရာများတွင် ခက်ခဲကြန့်ကြာနေခြင်း၊ မှားယွင်းမှုများ ကိုမသိရှိပဲ အမှားများနောက်သို့သာလိုက်မိနေခြင်း၊ ထိုကဲ့သို့ကိစ္စရပ်မျိုး ဖြစ်တတ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရ့ပြီး၊ Self-Study လုပ်သူများမှ ထိုအချက်ကို သတိချပ်ရပါမည်။
Self-Study လုပ်ရခြင်းသည် မိမိ၏ လေ့လာသင်ယူရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် အဖွဲ့လိုက် သင်ကြားရာတွင် ကြာတတ်သော အလေ့အထများကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ Self-study Learner သမား တစ်ယောက်ကို အကြောင်းအရာတစ်ခု (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုပါစို့) အတွက် Presentation လုပ်ရမည် ဟု ကမ်းလှမ်းလာပါက ထိုအကြောင်းအရာအတွက် သင်တန်းတက်မည့်အစား သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ကိုသာ ရှာဖွေလေ့လာပြီး ပွဲနှင့်လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်စေမည့် ပုံစံများကိုသာ ရှာဖွေလေ့လာ ပြင်ဆင်နေပါပေလိမ့်မည်။
• သင်တန်းစရိတ်များမပေးရလို့ Self-study သည်ငွေမကုန်စေပါဘူး၊ နေရာတိုင်း တွင်လုပ်ဆောင်လို့ ရသည့်အတွက် သွားလာရသည့်အချိန်ကိုလျော့ချပေးကာ အချိန်ကုန်သက်သာစေပါတယ်။
• ထိုင်နေရင်း၊ လမ်းလျောက်နေရင်း၊ လှဲနေရင်း၊ ကားစီးနေရင်း မိမိကြိုက်သလို စိတ်ပါသလို မိမိတို့လိုအပ်နေတာကို လေ့လာလို့ရသဖြင့် Flexible ဖြစ်စေပါသည်။
• Self-Study လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ပိုမို အားကိုးမိစေကာ၊ တစ်ကိုယ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အားဖြစ်စေ ပါတယ်။
မိမိတို့ လေ့လာလိုသော၊ သိရှိချင်သော အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာမိလေလေ၊ ပိုမိုသိရှိလာလေလေ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေကာ Motivation ကိုတက်စေပါသည်။
• Dead-Lineကိုသတ်မှတ်ထားဖို့နှင့် ၊ လေ့လာသောအချိန်တွေကို ခွဲဝေမျှတမ်းစီမံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
• Learning Objective များ achievement ရသည်အထိ မိမိတို့လေ့လာလိုက်သော အကြောင်းအရာများကို တစ်ပိုင်းတစ်စနှင့် မေ့မေ့လျော့လျော့ မရှိစေရန် သေချာစွာအာရုံစိုက်ကာ Follow-up လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
• တိကျစွာ ချမှတ်ထားသော မိမိ၏ Learning Objective ထဲမှ ခက်ခဲနေသော အပိုင်းများကိုချန်ထားပါ၊ အကူညီလိုအပ်ပါက သိရှိနားလည်တက်ကျွမ်းသူထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။ မေးမြန်းရာတွင် စနစ်တကျ မေးခွန်း ထုတ်နိုင်စေရန် အသေအချာ ပြင်ဆင်သွားပါ။
• အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် သင်လေ့လာနေသော Learning Objective သည် Achievement ဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရောက်ပါက ဒီ့ထက်ပိုဆက်လေ့လာသင့်မသင့်နှင့် တစ်ခြားဘာအကြောင်းအရာများ ကို ချိတ်ဆက်လေ့လာမလဲဆိုတာကိုလည်း သင်၏ အခြေအနေ (Career Progressive) ပေါ်မူတည်ကာ အကဲဖြတ် ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
• လေ့လာရာတွင် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်မြောက်များစွာကို စုဆောင်းပေးထားသော အရင်းအမြစ် စင်တာ (ဥပမာ − စာကြည့်တိုက်များ၊ အမေရိကန်စင်တာ − အစရှိသည့်နေရာ) တွေထံ မှ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ စာတမ်းတွေ၊ သုတေသနစာတမ်းတွေ နှင့် တစ်ခြားသော သင့်လေ့လာမှုအတွက် အရေးပါတာတွေကိုလည်း လေ့လာလို့ ရပါသေးတယ်။
Self-Study ကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် အလုပ်ဖြစ်စေရန် အောက်ပါအချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါ၊
Self- Study လုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက် Check-List
• တိကျသော Learning Objective များကို ချမှတ်ပါ။ (ဥပမာ − ယခုလေ့လာနေတာတွေပြီးပြတ်သောအခါ မိမိဘာတွေကိုလုပ်ဆောင်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာပေါ့)။
• ပထမအဆင့်မှ ချမှတ်ထားသော Learning Objective ကို မေးခွန်းများဆက်တိုက်ထုတ်ပါ။ (ထိုသို့ မေးခွန်းထုတ်ခြင်းသည် မိမိ ဘယ်နေရာကစတင်လေ့လာရင် အဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့လမ်းစကိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်)။
• မိမိလေ့လာမည့် ဘာသာရပ် အကြောင်းအရာအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်များစုဆောင်းနိုင်စေရန် လိုအပ်သောအရာများ( ဥပမာ − စာအုပ်စာတမ်း၊ Internet Website ၊ တစ်ခြားသော အရာများ နှင့် ထိုပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ)။
• သင်လေ့လာနေတာတွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ သင့်ကိုကူညီဆွေးနွေးပေးနိုင်မည့်သူတွေ၊ သင့်သိရှိလေ့လာထားတဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မည့်နေရာတွေကိုရှာဖွေပါ။
• Information Source တွေကို List လုပ်ပါ၊ Reflective ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ သင့်ကိုကူညီသူတွေကိုလည်းမှတ်သားထားပါ။
• သင့်ရဲ့ Learning Objective ကိုထပ်မံ၍ အကဲဖြတ်ပါ ၊ သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ၊ အကယ်၍ သင်လေ့လာလိုတာတွေကို လေ့လာပြီးရင် ဘာကိုဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုလည်း အဖြေရှာရင်း ရှေ့ဆက်သွားမည့် အနာဂတ် လုပ်ငန်းစဉ်တွေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိစိစစ်ပါ။
• ယခုလေ့လာလိုက်တဲ့ လေ့လာမှုအရ သင်နှင့် သင့်အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်မလဲ ၊ ဘယ်လောက်ထိ အကျိုး ပြုနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားလဲ။
ဘယ်သူတွေသည် Self-Study ကို ပိုမိုကာ လိုအပ်မလဲ၊
• ကျောင်းတွင်းစာများကိုလေ့လာနေသောကျောင်းသားများ၊ ကျောင်းပြင်ပ မိမိနှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ်များကို လေ့လာနေသူများ (မလေ့လာခင် ဘာသာရပ်အခြေခံများကို ကောင်းစွာသင်ကြားတက်မြောက်ထားသူဖြစ်ရမည်) ။
• သီအိုရီပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထူးကျွမ်းကျင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ။
• အလုပ်များကိုနေ့စဉ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး သင်တန်းမတတ်ရောက်နိုင်သူများ။
• သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို စနစ်တကျမလေ့လာမသင်ယူခဲ့ရသောသူများ။
• လက်ရှိတွင် ပြသနာရပ်တစ်ချို့ကိုကြုံတွေ့နေရပြီး ထိုပြသနာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် လေ့လာ ဆောင်ရွက်နေသူများ။
• ရာထူးတိုးရန်ကြိုးစားနေသော ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်နေရာကောင်းသို့ ပြောင်းချင်နေသူများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နယ်ပယ် ပြောင်းလဲချင် သူများ။
• Project ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ကြိုးစားနေရသောအဖွဲ့အစည်များ။
• အခြေအနေတစ်ခုအပေါ်တွင် (ဥပမာ- သင်တန်းများ၊ Seminar ဟောပြောပွဲများ၊ Workshop များ) Learner များမေးခွန်းထုတ်ထားမှုများကို ပွဲအတွင်း နောက်မှ အကြောင်းပြန် ဖြေဆိုမည်ဟု ပြောခဲ့ခြင်းအပေါ် ပွဲပြီးတွင် ဖြေဆိုအကြောင်းပြန်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေရသော ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများ စသည်တို့သည် တစ်ခြားသူများထက် ပိုမိုကာလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဒါဆိုရင် Self-Study လုပ်ဆောင်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုးတွေကို သိလောက်ပြီပေါ့၊ လုပ်ဆောင်ဖို့ကို စာရေးသူမှ အားပေးပါရစေ။ ယခုဒီဆောင်းပါးကိုလည်း Self-Study Learner များ များပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်ကာ ယခု တစ်ပတ်အတွက်ရေးသားလိုက်ရပါသည်။